ओलीलाई महान हुने अवसर | रेडियो झापा 100.7 MHz.
ओलीलाई महान हुने अवसर
१७ हजारका प्रेतात्माहरुले तर्साउँदै
अनिलभक्त खरेल (अमेरिका) भर्जिनिया मंगलबार, मंसिर ३०, २०७७ ६:५१:१६
नेपालबाट विधिवत रुपमा राजा र हिन्दु धर्म फालिएको पनि १२ वर्ष पुरा भैसकेको छ । राजा र हिन्दुराष्ट फाल्दा चुपचाप बसेका बसेकाहरु पछिल्लो समयमा अहिले “राजा आउ देश बचाउ” भनेर जताततै चिच्याहट गरिरहेका छन् । अहिले राष्टिय झण्डा सहित सकडमा देखिएका मोटरसाइकल र जनताको ताँतीले सत्ताधारीहरुको मुटुमा ढ्यांग्रो बजिरहेको छ त्यसैले उनीहरु भुतप्रेत सल्बलाए भन्दैछन् । घरमा चोखे मीठो पाक्योभने सबैभन्दा पहिला पितृ, देव र भुतपिसाचहरुलाई छ’ट्याउन’ पर्छ । भुतप्रेतहरुको चित्त राम्ररी बुझाइएन भने कुनै कार्यपनि सफल हुन दिदैनन् दुःख दिइरहन्छन् । अहिले जनयुद्धकालमा मारिएका १७ हजारका प्रेतात्माहरु भुतपे्रत भएर आएका हुन सक्छन् । भुतप्रेतहरुले दुख दिएपछि कतिपयको घरबास उठीबास भएका हामीले सुन्दै आएका छौं । भुतप्रेतले तर्साउने ठाउँमा कोहीपनि नबस्ने भएको हुँदा कतै अहिलेको व्यवस्था र सरकारभुतप्रेतबाट डराएर त भाग्दैछैन ?मैले आफु सानो सदा भुतप्रेतको कथा धेरै सुनेको थिए । त्यही भएर एक्लै कोठामा सुत्न जान पनि डराउँथे । सिरक उल्टो ओढ्दा समेत सिरकले खान्छ भनेर सिरक आ्ढ्न डराउँथे । भुतको छायाँ पर्यो भने पनि त्यो मानिस ३ दिनमा रगत छादेर मर्छ भन्ने पनि बुढापाकाबाट सुनेको थिए । त्यसैले सानोमा जुनेली रातमा होस् कि अपरान्हमा होस् आप्mनो छायाँसंग आफै डराउँथे । आफु हिडे हिड्ने, आफुरोकिए रोकिने, आफुदौडिए दौडिने त्यो छायाँ भुत हो कि भनेर तर्सन्थे र सुनसान बाटोआएपछि बेतोडले भाग्थे । किनकि मेरा मामा पर्ने एकजना भुतसंग लडेकै कारण बितेका घटना मैले सानैमा सुनेको थिए । अहिले सरकारपक्षका केही व्यक्तिहरु भुतप्रेतहरुसंग लड्ने भन्दैछन् त्यसैले मलाई ती मेरा बालमस्तिष्कको सम्झना आयो । यदि मैले बाल्यकालमा सुनेको त्यो घटना सत्य हो भने यो सरकार र गणतन्त्रको आयु सकिदैछ हैन त्यो घटना बच्चा तर्साउन रचिएको काल्पनिक घटना हो भने म जस्तै सरकार आप्mनो छायाँसंग आफै तर्सिरहेको छ ।हुन त कतिपय धामीझाक्रीहरु भुत, पिसाच मात्र है वीर र छौडा नचाएर बस्छन् । तीनिहरुले मागेको कुरा दिइरहन्छन् । यदि त्यो दिन छोडेको खण्डमा ती भुतपे्रतहरुले त्यही धामीलाई सिध्याइदिनेछ । जान्ने धामीले सबै भुतपृ्रत चिनेको हुन्छ र उनीहरुलाई त्यही अनुसारको मान्को, थान्को लगाएर राखेको हुन्छ ।आआफ्नो थान्को मान्को लगाइएनभने भुतप्रेतहरु सल्बलाउँछन् । कतै अहिलेको व्यवस्था र सरकारले भुतपे्रतहरुको थान्को मान्को नलगाएको भएरनै सल्बलाएका त हैनन् ? यी सल्बलाएकाभुतप्रेतहरुको थान्को मान्को नलगाउने हो भने यी प्रेतात्माहरुले ककस्लाई लाने हो समयले बताउला ।
विश्वलाई अहिले कोरोनाले आक्रान्त पारिरहेको छ । त्यसबाट नेपाल पनि अछुतो छैन । पछिल्लो समयमा कोरोनाले नेपाल नराम्ररी सताइरहेको छ । सुरुवातीको अमेरिकाको स्थितिमा नेपाल पुगिसकेको छ । तर नेपालका सत्ताधारीहरुलाई चाहे भुकम्प आवोस् चाहे कोरोनारुपी महामारी आवोस् दुबै महादशैं भैरहेको छ । भ्रष्टचार अब हजार, लाख र करोडमा हैन कि अरबौंमा हुँदैछ । यस्तो महामारीको बेलामा २ तिहाई सरकार पदको भागवण्डाको लागि गाँड कोराकोर गरेर बसिरहेका छन् । उनीहरुको कुनैपनि बैठकमा कोराना महामारी नियन्त्रणको विषयबारे छलफल समेत भएका छैनन् जुन बिडम्बना खेदजनक छ । खाली पदको बाँडफाडका विषयलाई लिएर महिनौंदेखि गाँड कोराकोर भैरहेको छ । कहाँबाट कमिसन आउँछ त्यसैमा नै उनीहरुको ध्यान केन्द्रित भैरहेको छ । यही कमाउधन्दाको कारण २ तिहाई सरकारको पार्टीभित्रको लडाई कस्ले बढि भ्रष्टाचार गर्यो भनेर आरोप प्रत्यारोपमा पुगिसकेको छ । पुष्पकमलको १९ पेजको आरोप केपी ओलीले ३८ पेजमा दिएपछि सर्वत्र खैलाबैला भएको छ। जसका कारण नेपाली राजनीतिमा शक्तिराष्टहरुको चलखेल हावी हुँदै गैरहेको छ । चिनिया र भारतीय प्रतिनिधिहरुको दौडधुप बाक्लिदै गैरहेको छ । उनीहरुकै निर्देशनमा खिचडि पकाउन समयावधि पनि थपिदै छ जुन देश र जनतमाथिको धोका तथा गद्दारी हो ।
केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल उर्फ प्रचण्डले एक अर्काप्रति पार्टीको सचिवालय बैठकमा लगाइएका आरोप प्रत्यारोपले दुबै पक्षले आफ्नालाई देव र अर्कोलाई राक्षसीको संज्ञा दिइरहेका छन् । अब यहाँ एकले अर्कोलाई सिद्धाएर अगाडि बढ्नुको बिकल्प छैन । दुबै नराम्रा मध्ये कुन नराम्रोलाई पहिला सिद्धाउने भन्ने कुराले बढी महत्व राख्छ । अब पनि चर्केको काँचको गिलासलाई सुपरग्लु लगाएर जोडजाड गरेर चलाउनुको सट्टा त्यसलाई ढुंगामा बजारी चकनाचुर पारी पार्टी र देशलाई नेकपाको बन्धनबाट मुक्ति दिलाउनु नै सबैभन्दा उपयुक्त र उत्तम हुनेछ । यी दुबैले लगाएका आरोपहरु रिसको आवेगमा बोलिएको मात्रै हुन सक्दैन ।“सर्पको खुट्टा सर्पले मात्र देख्छ” भने झैं एक भ्रष्टको कर्तुत अर्को भ्रष्टले नदेख्ने भन्ने हुन सक्दैन । यो आरोप जनयुद्धकालमा लगाइने लाल गद्दार मात्र हुन सक्दैन । एमाले फुटाउदा मालेका वामदेव योगेशहरुले एमालेमाथि लगाएको २६ राष्टघातमा मात्र सिमित छैनन् । यसमा आम जनताका आवाजहरु प्रतिबिम्ब छन् । पार्टीको सचिवालय बैठकले दुबैमाथि कार्वाहीको आँट गर्न सक्छ कि सक्दैन समयले बताउँछ । हुन त “जता मल्कु उतै ढल्कु” किसिमका सचिवालय सदस्य हुँदासम्म नेकपाले त्यस्तो कुनै न्यायिक निसाफ गर्न सक्दैन । एकता माधवकुमार नेपाल पार्टी महासचिव हुँदा “नेकपा एमाले, न पोथी न भाले” भन्ने आरोप लगाइएको कुरा कसैले नभुलुन् ।
अहिले केपी शर्मा ओलीलाई नाकाबन्दीपछि अर्कोपटक महान हुने अवसर आउँदैछ । केपी ओलीकै कारण जनताले नेकपालाई स्पष्ट बहुमत दिएका हुन् । “जस्को लागि गोठ बनायो त्यस्को पुच्छर बाहिर” भनेजस्तै जस्को कारण जनताले सरकार बनाउन दिए उसैलाई फाल्नको लागि मात्र गरिएको प्रपञ्चलाई पर्दाफास नगर्ने हो भने २ तिहाईको सरकार र अल्पमतको सरकारमा के फरक रह्यो र ?केपी शर्मा ओलीले हिम्मत गर्ने हो भने उनको नाम नेपालको इतिहासमा सुनौलो अक्षरले लेखिनेछ । अहिले प्रम केपी शर्मा ओलीले पुष्पकमल दाहाल उर्फ प्रचण्डमाथि जे जस्तो आरोप लगाएका छन् ती आरोप सम्बन्धित निकायबाट पुष्टि गरेर उनीमाथि कार्वाही गरेमा प्रचण्डका मलद्धारेबाहेक सबै नेपालीले जयजयकार गर्नेछन् । १७ हजारका प्रेतात्माले पनि शान्ति पाउने छ । केपीले यस्तो गर्न लागेको चाल पाएर नै कांग्रसलाई बिच्क्याउन रामचन्द्र पौडेललाई तनहुँमा राज्यसत्ताले अभद्र व्यवहार गरेको हुनुपर्छ । सबैसंग एकैपटक आक्रमण गर्नु ओलीको लागि खतरा छ । ओलीको बेलैमा चेत खुलोस् । अस्तु